Ukukhanya koMkhukula we-LED - i-china i-LED yokuKhanya kokuKhanya abavelisi, abaxhasi
Ukukhanya komsebenzi we-LED
Ukutsha kwakhona ukukhanya komsebenzi
Ukukhanya koMkhukula weClassic
Ukukhanya koMkhukula weJFF ngeBhokisi yeJunction
Uluhlu lwee-LED ezikhuselekileyo ngaphakathi
X Series Floodlight Nge woluvo Microwave
Umgangatho ophezulu wokuPhakamisa okuPhakamileyo kwe-LED High Bay Light
Izibane eziSebenzayo eziPhathekayo zezibane ze-LED
UkuKhanya kokuSebenza ngepakethi yebhetri
I-Ultrathin enokutshaja kwakhona ukuKhanya koMsebenzi we-LED
Amanqaku: Uhlobo lwe-backpack yohlobo oluthile lokukhanya kwezikhukula ngeendlela ezahlukeneyo zeqokobhe. Ukuveliswa kwemveliso yealuminium esemgangathweni ophezulu. Nokumelana Execellent kunye nokuqhekeka anti. Akululanga ukuphela, ukusasaza ubushushu okukhulu. Yenziwe ngeglasi yokuqinisa ephezulu ebonakalayo, ukuhambisa ukukhanya okuphezulu njenge-98%, akukho lula ukwahlula ukukhanya kuqaqambile kwaye kuyalingana. Ukuhambisa ngamandla ...
Iimpawu: Ibhokisi yokuhlangana yombane (ekwabizwa ngokuba yi "jbox") yindawo evaliweyo yokudibanisa umbane. Iibhokisi zeJunction zikhusela uqhagamshelo lombane kwimozulu, kunye nokuthintela abantu ekuhlaselweni ngombane ngengozi. Iibhokisi zeJunction ziyinxalenye yenkqubo yokhuselo lwesekethe apho kufuneka kubonelelwe ukuthembeka kwesekethe, njengokukhanyiswa okungxamisekileyo okanye iintambo zombane zongxamiseko, okanye iintambo phakathi kwesixhobo senyukliya kunye negumbi lolawulo. Kolu fakelo, ...
Ukukhanya koMkhukula oKhanya nge-Pir Sensor
Iimpawu: Yonke inzwa ibangelwa zizinto ezahlukeneyo kwaye inzwa ye-PIR nayo ayibikho ngaphandle. Ifumanisa amandla e-infrared aveliswa bubushushu bomzimba. Ngamanye amagama, inzwa ye-PIR ilinganisa ukukhanya kwe-infrared okuphuma kwizinto ezivelisa ubushushu (njengabantu nezilwanyana). Ngoncedo lwe-crystalline material, ifumana i-infrared radiation ebekwe kwindawo yayo yokujonga kwaye ithumele umqondiso kwinkqubo yolawulo ekhanyayo xa intshukumo i ...
Iimpawu: Ukukhanya kwezikhukula kukukhanya okubanzi, ukukhanya okuphezulu okwenziweyo. Oku kukhokelwa kukukhanya kwezikhukula kunandipha uyilo, oluncinci kunye nobuhle obuhle obamkelekileyo ekubunjweni kwezinto zealuminium. Umbala weqokobhe ngokubanzi umnyama omnyama, kwaye umbala ungenziwa ngokwezifiso ngokweemfuno. I-Luminaires iya kukhuselwa emanzini kwaye ifezekise i-IP65 kwinqanaba lokukhuselwa okuphezulu. Inokufezekisa iziphumo ezifanayo zokukhanyisa, iziphumo zokukhanya kwezikhukula ezikude kwaye zisetyenziswa ikakhulu ...
Iimpawu: Inzwa yokuhamba kwemicrowave isebenzisa i-electro-magnetic radiation. Ikhupha amaza abonakalisiweyo emva koko afunyenwe. Umamkeli uhlalutya amaza abuyiselwe umva. Ukuba kukho into ehamba egumbini, la maza aza kutshintshwa. Xa amaza akhutshiweyo echukumisa into, abonakaliswa ngasemva, abangela ukuba isibane sikhanye ngokwawo. Kwaye kwinkampani yethu iHeng jian ukukhanya kwezikhukula nge-microwave sensor, iiLuminaires ziya kukhuselwa emanzini kwaye ziphumeze i-IP65 ephezulu ...
Bhalisa kuLuhlu lwethu lweMveliso:
NO.60 INDUSTRY INDLELA, Zhangxi, CIXI, Ningbo, 315313 ETSHAYINA